Ka Faa’iideyso 5-Arrimood Oo Noloshada Ku Soo Mara, Ahna Nimcooyinka ILAAHAY Ugu Deeqay Bini’aadamkiisa: Qalinkii Mustafe-Jannaale | HAYAAN NEWS
Ka Faa’iideyso 5-Arrimood Oo Noloshada Ku Soo Mara, Ahna Nimcooyinka ILAAHAY Ugu Deeqay Bini’aadamkiisa: Qalinkii Mustafe-Jannaale
Ka Faa’iideyso Dhalinyaranimadaada Inta Aanad Gaboonin oo tamarta kugu jirta ha ku lumin meel cido ah oo dadkaaga iyo dalkaaga u faa’iidee oo ha yareysan wanaaga aad umadda tari-karto. Dhiso mustaqbal wanaagsan oo aad ku liibaanto aduun iyo aakhiraba.
Ka Faa’iidayso Caafimaadka inta aanad Xanuunsanin oo noqo qof wax tar leh oo hadhka Alle geli doona shaleyto maxay ku tari.
Ka Faa’idayso Qaninimaddaada Ka hor inta aanay noloshaada daboolin Faqri iyo Saboolnimada, lacagtu ku soo marta ha kala bakhaylin jimciyaadka khayriyada ah, ka qeyb-qaado quudinta masaakiinta, dhisida masaajidada iyo qoddida Ceelasha, kafaalo qaadida agoonta, badso sadaqo-bixinta. Khayr wal oo ku soo mara ha ka gaabbin.
Ka Faa’iideyso Firaaqadaada inta aanad mashquulin ka hor, qof walba waxa soo mara wakhti yar oo uu furaaqo leeyahay oo looga baahan yahay inuu kaga faa’iideyso wax manaafacaad u leh, oo nafta iyo ehelkaba faa’iido u ah deriskana faa’iido u ah guud ahaana mujtamaca faa’iido u ah. Hada-ba Waa su’aale maalinkasta wakhtiga ma faa’iideysa oo qu’raan ma akhridaa, Diinta wakhti ma gelisa inaad barato, oo ehelkaaga iyo qaraabadaada ma Xidhiidhisaa? Mise waad iskala weyn tahay!!!. Dadka Xanuunsanaya ma booqataa? Si adigana lagu soo booqdo marka aad Xanuunsato. Deriskaaga ma tustaa quruxda islaamka.
Ka Faa’iideyso Maqsadka lagu abuuray inta aanad Dhimanin oo Xabaalaha lagu geynin, ogoow qof walba waxa soo mara cimri xaddidan oo uu nool-yahay, waxna qabsan karo. Walaal noqo qof caaqil ah, dar-daaranka uu siiyay Nebigeeni Maxamed (N.N.K.H) oo aad noqoto deriskiisa.
Qalinkii Mustafe Cabdi Maxamed (Mustafe-Jannaale)